Isimemezelo sokuhlanganiswa kwenkampani
Omunye umqondo ovamile ngamata we-yoga welineni
Linen yoga mat is a yoga mat with lines. Iguqulwa ngesisekelo soqobo lwendabuko lwe-yoga. Isebenzisa i-orthographic yoga system ukufaka umlawuli engqondweni yomfundisi we-yoga ebusweni bomsizi ukusiza abasebenza ukwenza ama-yoga asanas afanele. Kuyasiza futhi ...
Ungayigcina kanjani i-TPE yoga mat
Lapho senza i-yoga ngokuqinile, isikhumba futhi sinokuxhumana okuningi ne-TPE yoga mat, kepha ukucwiliswa kwezithukuthuku kwenza umugqa we-TPE yoga kube lula ukuzalanisa amabhaktheriya, futhi ukuhlanzwa kombhede we-TPE yoga akunakushaywa indiva. Ngakho-ke siwuhlanza kanjani umata we-yoga? 1. Khetha okulungile TPE yog ...
Kungani usebenzisa amacansi e-TPE yoga ukwenza i-yoga
Lapho senza izivivinyo ze-yoga, kufanele sikhethe umata omuhle we-yoga ukusiza. Mhlawumbe abanye abangane bazothi: "Ngingakwazi yini ukusebenzisa ingubo noma umata wokugibela wengane?". Lokhu kungasho kuphela ukuthi awazi okuningi nge-yoga, futhi awazi okuningi ngomzimba wakho. ...
Isimemezelo seholide lika-2021 Spring Festival
Ozakwethu abathandekayo ekhaya nakwamanye amazwe: Ngiyabonga ngoxhaso lwenu kulo nyaka. Isikhathi sethu samaholide sisuka ku-2021-02-05 kuya ku-2021-02-18. Ngosuku lwesishiyagalombili ngosuku lwesishiyagalombili lomsebenzi, ukuthunyelwa okujwayelekile kungenziwa. Ngesikhathi soMkhosi Wentwasahlobo, isikhathi sokulethwa sizohamba kancane, ngakho-ke isikhathi sokulethwa singaba ...
Ungalikhetha kanjani ibhendi lokumelana
Amabhendi wokumelana nawo abizwa nangokuthi amabhendi okumelana nobungqabavu, amabhendi wokuqina kokuqina noma amabhendi we-yoga. Ngokuvamile zenziwe nge-latex noma i-TPE futhi zisetshenziselwa kakhulu ukusebenzisa ukumelana nomzimba noma ukunikeza usizo ngesikhathi sokuvivinya umzimba. Lapho ukhetha ibhendi lokumelana, u ...
xpe ukukhasa mat futhi epe ukukhasa mat mat umehluko
Sinakekela ingane ngokucophelela okukhulu. Ezinyangeni ezimbalwa ingane izelwe, ingane izoqala ukufunda ukukhasa okulula. Ngalesi sikhathi, kudingeka umata osezingeni eliphezulu wokukhasa ukusiza ingane ifunde ukukhasa nokuvimbela ukuthi ingane ingawi noma ilimale ngengozi ngale nqubo. B ...
Ukukhuluma nge-TPE Yoga Mat
Omata beYoga manje bahlukaniswe izinhlobo ezimbili: amacansi endabuko e-yoga namatagi we-yoga akhayo. Omata be-yoga bendabuko abanayo imigqa, futhi imvamisa banomphumela wokuvikelwa, ama-anti-slip kanye nokuzihlukanisa, kuyilapho amacansi amahle e-yoga enemigqa. Kusemacansini endabuko eyoga. Ngesisekelo se-inno ...
Mayelana ne-TPE yoga mat ethwele futhi isingeniso sokulwa nesiliphu ephathekayo
Imvamisa i-yogi izolungisa amacansi amabili, elilodwa elekhaya kanye nelokuzilolonga ngaphandle. Ukuphatheka kohlaka lwe-TPE yoga ekhaya kunganakwa, kepha umata kumele kube lula ukuwuthwala. Okokuqala, isisindo kufanele sibe lula. Izinhlobo eziningi zizokhiqiza amacansi e-1.5-3mm travel TPE yoga, okungaba lula ...
Uyini usayizi ojwayelekile we-TPE yoga mat
Osayizi bamathegi ejwayelekile we-TPE we-yoga ikakhulukazi angama-61cmx173cm no-61cmx183cm. Kepha njengamanje, imikhiqizo eyinhloko yasekhaya isese-61cmx173cm. Kukhona nokunye ukucaciswa. Umata we-TPE yoga okwamanje othunyelwa eJapan ungama-65x175cm. Ubukhulu TPE yoga mata kukhona m ...
I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, iphazili yokuzivocavoca mat, Isikhwama se-Yoga Sling, Isikhwama Sokuhamba seYoga, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba,